I-Triopetra View villa 1 - I-Airbnb
I-Triopetra View villa 1
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguStella &Maria
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uStella &Maria iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu entsha enendawo yokuphola, enempahla yonke,
kunye nokubona okumangalisayo kolwandle oludumileyo lwe-Triopetra. (Ingabhukishwa kwakhona nge- "Triopetra View villa 1 - kubantu abayi-4" kunye "ne-Triopetra View house - yabantu abayi-2").
I-Triopetra View Villa yindlu enemigangatho emibini enegadi kunye nepuli yokuqubha yabucala. Indawo yokubraya, indawo yokupaka esimahla neWiFi yasimahla ziyafumaneka ukuba zisetyenziswe ziindwendwe zethu.
Ngaphantsi kukho ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela, indawo yokugcina izinto kwaye ekugqibeleni igumbi lokuhlala eline-smart TV nendawo yokubasa umlilo.
Kumgangatho wesibini kukho amagumbi okulala amabini. Elinye lamagumbi okulala linebhedi elala abantu ababini kunye nebhalkhoni apho ungabona khona (i-URL IFIHLIWE) Kwelinye icala kukho iibhedi ezimbini ezilala umntu omnye kunye nebhalkhoni ejonge iintaba.
Indawo encinci yaseCrete phambi kolwandle lwaseLybic. Ithuba elihle lokonwabela indalo yaseCrete kwimizuzu eyi-10 ukusuka kwizindlu onokuzifumana kolunye lwamalwandle amahle aseCrete, iPreveli kunye nekhephu layo elihle lesundu!
Umbuki zindwendwe ngu- Stella &Maria
Sikhona imini nobusuku kuwe. Qho ngosuku okanye ngosuku lwesihlanu ngo-11:00 okanye ngo-17: 00 ( ixesha linokulungiswa ngokwezinto ozithandayo ) , ukucoca indlu nokucocwa kwepuli kuza kwenzeka.
Inombolo yomthetho: 00000110079